Dharka Ilmaha Kubadda Cagta Waa Doll-ka Dumarka ee Aad Jeceshahay
157cm （B Koobka）
162cm （E Koob
166cm （C Koob
164cm （H Koob
173cm （H Koob
172cm （B Koobka）
172cm （D Koob
Timaha WM 1
Timaha WM 2
Timaha WM 3
Timaha WM 4
Timaha WM 5
Timaha WM 6
Timaha WM 7
Timaha WM 8
Timaha WM 9
Timaha WM 10
Timaha WM 11
Timaha WM 12
Timaha WM 13
Timaha WM 14
Timaha WM 15
❤ Saamiyada California.
❤ Waqtiga la bixinayo ee Mareykanka 3 ilaa 5 maalmood oo shaqo.
❤ 100% Khatar la'aan.
Mar alla markii aan dib ugu laabannay gudaha si aan ugala qeybgalno ciyaaraha guddiga asxaabtiisa, marwalba waxaan raadinayay habab qarsoodi ah oo aan kula xiriiro, isaguna wuxuu had iyo jeer raadinayay isla habka taxaddar leh ee lagu xoqin karo bowdadayda iyo qeybaha. Ugu dambeyntiina, saaxiibkiis wuxuu ku seexday kursiga fadhiga oo waxaan galnay qolka jiifka. Jinsigu wuu ka kululyahay sidii aan moodayay. Markii aan ku tuuray sariirta, wuxuu ku sigtay inuu dharka iga qaato. Waxay ahayd waali. Wax dhibaato ah nagama gelin ilaalinta. Daqiiqado yar kadib, waxaan dareemay in shahwadiisu ku qaraxday jirkayga. Intaa ka dib, annaga iyo saaxiibkiis waxaan ku soo dhuumannay qolka fadhiga annaga oo aan xitaa ogeyn waxa dhacay.
Urdolls waxay ku siineysaa caruusado jinsi oo tayo sare leh oo ay sameysay soo saare xirfadle ah WM. Caruusadda jacaylka ee astaanta WM waxay ka samaysan tahay walxaha TPE. Astaantu waxay u heellan tahay samaynta caruusadaha jinsiga ee TPE oo leh qiimo hooseeya iyo alaab tayo sare leh. Waxaan damaanad qaadeynaa inaad heli doonto isla caruusadda sawirka. Boos kasta oo galmo ah waa suurtagal. 4 dariiqo oo madadaalo ah: siilka, naaska, afka, iyo futada si aad u dareento dareenka galmada gabar dhab ah. Alaabtayadu waxay ka samaysan yihiin TPE, qalabka silikoon caafimaad ee ugu fiican, oo leh tayada heerka koowaad.
Dhererka ： 157cm B-koob
Miisaan ： 29kg
Bust buuxa 68.5cm
Hoos ust 63cm
Dhexda ： 56.8cm
Miskaha ： 83cm
Dhererka Cagta: 21.5cm
Ballaca Garabka: 33cm
Qoto dheer Siilka: 18cm
Qoto dheer Futada: 15cm
Qoto Dheer: 12cm
Indhaha Baaxadda Leh B Cup Emma Finn Ciyaarta Timaha Roll Cas TPE 157 ...
Sheekada taariikh nololeedka Emma: Ma ogtahay in gabdhaha timaha cas ay yihiin kuwa ugu jacaylka iyo jacaylka badan? Fiiri quruxdan caatada ah ee quruxda badan lehna jirka quruxda badan iyo wejiyada dhabta ah - ma doonaysid inaad ka baxdid qolka jiifka. Emma waa mid faraxsan oo firfircoon, laakiin sida walaasheed dheer, hubaal waxaa jiri doona ...
Naasaha Yar TPE Doll Muriel Ubaxa Cagaaran Indhaha Nabarrada 118CM ...
Sheekada sooyaalka Muriel Flower Kaliya fiiri indhaheeda riyadeed oo u oggolow inay iyadu hoggaanka qabato. Halkan ka hel. Waxay ilaalisaa jir isboorti iyo dabacsan oo qof walba sasabanaya. Gabadha yar waxay raadineysaa wehel xiise leh oo la safri doona iyada si ay ula kulanto dabeecadda ugu fiican. Weligaa ma ...
Naag Uur Leh Iskaashatada Dadka Waaweyn ee Caloosha 160CM Wide Ass dameer yaryar ...
Adam Harrington sheekadiisa asalka ah Waxaa laga yaabaa in habeeno cidla ah aan la tirin karin, inta badan kaligaa waad joogi doontaa, adoo dib u milicsanaya noloshaadii, iyo xusuusihii oo dhan ayaa maskaxdaada ku soo dhacaya. Waxaa jira farxad iyo qoomamo. Miyaad si gaar ah u dooneysaa inaad sameyso go'aanka aad ka qoomameyso, laga yaabee inay ku siin karto fursad aad ku timaado b ...
Sexy TPE Doll Sibyl Tracy Naasaha Waaweyn 170CM Dhexda Yar ee Adult ...
Sheekada taariikh nololeedka Sibyl: Waxay ilaalisaa jir isboorti iyo dabacsanaan cid walba sasabi doonta. Waxay jeceshahay inay barafka barato xilliga qaboobaha waxayna ku leedahay qaab ciyaareedkeeda jirka iyo murqaha isboortiga. Iyadu waa wax kasta oo dadku rabaan. Aad bay u jajaban tahay oo sariirta ayay ku waalan tahay. Bal ka soo qaad inaad timahayga gadaal ka hagaajisay ...
Jaangayn Cute Fan Jiang Lizi 110CM Silicone Doll Adult Companio ...
Sheekada soo socota ee Jiang Lizi Iyadu waa mid soo jiidasho leh. Waxay leedahay suun yar oo qurux badan oo sameysma buundo qoto dheer oo udhaxeysa shafkeeda yar iyo badhideeda quruxda badan. Waxaan jecelahay inaan ku ciyaaro barafka, waxaan baraf garoobi karaa bilooyin anigoon caajisin, "ayay tiri." Qoob-ka-ciyaarku waa wax aad iigu faraxsan aniga. Markaan dhaansado, ...
Cute Petite Football Baby TPE Doll 158CM Caarada Dheer Caroline Jud ...
Waxay u balanqaaday inay adeeci doonto saaxiibkeed cusub oo ay ka mamnuucday inay wax uun ugu sameyso qolka jiifka - iyadu waa wada taada! In kasta oo aysan iyadu ahayn nooca qof kasta, waxaan si xaqiiqo ah kugula talinaynaa inaad iska hubiso. Waxay leedahay indho ballaadhan oo dhalaalaya oo runtii ka soocaya caruusadaha kale. Ciyaartoyda ayaa ku dhibtooday th ...
Naasaha jilicsan ee jilicsan Blanche 148CM TPE doll F koob Indho madow oo dhalaalaya
Waxay ka kooban tahay dhammaan gabdhaha Mareykanka. Iyadu waa xayawaan yar, laakiin qaab nololeedka gabdhaha dalka ayaa ka dhigaya mid firfircoon oo caato ah. Haddii aad rabto inaad waqti la qaadato gabdhaha jinsiga leh, caruusadan ayaa kaa caawin doonta inaad ku nasato habka ugu raaxada badan. Dabcan, gabadha aad ku aragto nolosha dhabta ah waxaa laga yaabaa inaysan u qurux badnayn sida ay tahay. Waxay sidoo kale aad u f ...